डाक्टर बोलाइदिनु भन्दा भन्दै नर्सहरूले नबोलाइदिएकै कारण सुत्केरीले सँसारबाटै विदा लिनुपर्यो – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > डाक्टर बोलाइदिनु भन्दा भन्दै नर्सहरूले नबोलाइदिएकै कारण सुत्केरीले सँसारबाटै विदा लिनुपर्यो
admin December 8, 2019 Uncategorized	0
मंसीर २२, चितवनको भरतपुर अस्पतालमा एक सुत्केरी महिलाको निधनको विषयमा तनाव सिर्जना भएको छ । अस्पतालको लापरबाहीले महिलाको निधन भएको भन्दै पीडित परिवारले आपत्ति जनाएका छन् । केहि दिन अगाडी गोरखा जिल्ला पालुङटार–९, मिर्काेट घर भएकी हाल सोलुखुम्बु जिल्लामा सेवारत २४ वर्षीया कल्पना केसीको सुत्केरीको लागि भएको अप्रेसनपछि पेटमा थप पीडा हुँदा अकालमा ज्यान गएको हो ।
बिरामी केसीले बारम्बार डिउटीमा खटिएका नर्सहरुलाई डाक्टर बोलाइदिन अनुरोध गर्दा पनि समयमा नबोलाएका कारण उनको निधन भएको भन्दै परिवारले दुख व्यक्त गरेका छन् । बेडमा रहेकी कल्पनाले मलाई निकै गार्हो भएको छ डाक्टर बोलाइदिनु न भन्दा पनि नर्सहरुको अटेरले गर्दा कल्पनाले संसारबा सधैका लागि बिदा लिनु परेको छ ।
दुखाइ निकै भएपछि नर्सहरुलाई निकै अनुरोध गरेपछि तीन घन्टासम्म पनि नर्सबाट डाक्टरलाई खबर नहुँदा सुत्केरीको अकालमा ज्या’न गएको हो । राति १२ बजेतिर नै अति पीडा भएपछि बिरामी आफैँले डाक्टर बोलाउन आग्रह गरेकोमा नर्सहरुले भने बिहान ३ बजेमात्रै डाक्टर बोलाएका थिए । नर्सले समयमै डाक्टरलाई खबर नगरेका कारण घटना भएको पीडित पक्षको भनाइ छ ।
बच्चाको भने हाल नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा एनआईसीयू कक्षमा उपचार भइरहेको छ । पुस ५ गते बच्चा जन्मने मिति तोकिए पनि मंसिर १६ गते नै एम्बुलेन्समार्फत बिरामीलाई काठमाडौँ हुँदै भरतपुर अस्पताल ल्याइएको थियो । भरतपुर अस्पतालमा राम्रो सुत्केरी सेवा छ भन्ने विश्वासले काठमाडौँ छोडेर पनि यहाँ ल्याएको आफन्तको भनाइ छ ।
उच्च रक्तचापबाट पीडित बिरामीको नियमित औषधि सेवनबाट सुत्केरी गराउन हुने भनी डाक्टरकै सल्लाहमा बिहीबार राति ११ बजे अप्रेसन गरिएको थियो । अप्रेसन सफल भई पोस्टअप वार्डमा सुत्केरी राखिएको र एनआईसीयू बेड सरकारी अस्पतालमा नहुँदा बच्चालाई नारायणी सामुदायिक अस्पताल लगिएको स्त्रीरोग विभाग प्रमुख डा. सुनिलमणि पोखरेलले बताए । मुटुमा सहजरुपमा रक्तसञ्चार हुन नसक्दा सुत्केरीको निधन भएको उनको भनाइ छ ।
नर्सहरुले समयमै डाक्टरलाई खवर नगरेकोप्रति गल्ती स्वीकार गरेको छलफलमा सहभागी आफन्तले बताए । आफन्तले समयमै डाक्टर नबोलाई उपचार गराउने नर्सहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । जवाफमा मेसु डा. तिवारीले बच्चाको सबै उपचार अस्पतालले गर्ने र पीडित पक्षसमेत सहभागी भएको एउटा अध्ययन समिति बनाउने भनी निर्णय गरेपछि सहमति बनेको थियो ।
सुत्केरी भएर ज्या’न गुमाएकी कल्पना आफै भेटेरिरियन डा हुन । कल्पनाको निधन पछि परिवारमा निकै ठुलो पिडा त छदै छ भने अब भर्खरै जन्मेको शिशुलाइ कसरि हुर्क्याउने भन्ने पनि एउटा ठुलो चुनौती थपिएको छ । शिशुलाई जन्म दिएर आफै यो संसारबाट बिदा भएको समाचार बाहिरीएपछि उनले पढ्ने कलेजका साथीभाईले पनि सामाजिक संजालमा उनको तस्विर राख्दै दुख व्यक्त गर्दै आफु मर्माहित भएको जनाएका छन् ।
अस्पतालका मेसु डा. श्रीराम तिवारी काठमाडौँ भएकाले दिनभर अनौपचारिक छलफलमात्रै भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा नर्सहरुले समयमै डाक्टरलाई खवर नगरेकोप्रति गल्ती स्वीकार गरेको छलफलमा सहभागी आफन्त प्रकाश भट्टले बताए । तर, मृतकका आफन्तले मेसु आएपछिमात्रै छलफल गर्ने भनेपछि साँझ ६ बजे पुनः छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा मृतकका आफन्तले समयमै डाक्टर नबोलाई उपचार गराउने नर्सहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । जवाफमा मेसु डा. तिवारीले बच्चाको सबै उपचार अस्पतालले गर्ने र पीडित पक्षसमेत सहभागी भएको एउटा अध्ययन समिति बनाउने भनी निर्णय गरेपछि सहमति बनेको थियो ।
चितवनमा अटो दुर्घटना अपडेटः मृ’तक चार जनाको सनाखत (नामसहित)
राप्ती नगरपालिका–५ मा आज साँझ अटो दुर्घटना हँुदा पाँच जनाको निधन भएको छ भने एक घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार सो नगरपालिका–४ चेपाङमार्गबाट भण्डारातर्फ आउँदै गरेको ना१ह ६४०९ नंको अटो राप्ती–५ डुम्रेखाडी पुल नजिक अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो ।
अटो पल्टिँदा अटोमा सवार पाँचको निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता एकनारायण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । निधन हुनेमा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका पिपलटार स्थायी घर भइ हाल खैरहनी नगरपालिका–८ बस्ने वर्ष ४९ का श्यामप्रसाद तिवारी, खैरहनी नगरपालिका–९ बस्ने वर्ष ४२ का विश्वमणि भण्डारी, राप्ती नगरपालिका–९ बस्ने वर्ष २५ की मिना खड्का, राप्ती नगरपालिका–९ बस्ने वर्ष ३२ की माया तामाङ रहेका छन् । अर्का एक महिलाको सनाखत भएको छैन । तिवारी, भण्डारी, खड्काको पुरानो मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो भने तामाङ र अर्का एक महिलाको भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । मृ तक सबैको श व पोष्टमार्टमका लागि भरतपुर श व गृहमा राखिएको छ ।
हस्पिटलमा जन्मेको शिशुलाइ घर लिएर जाँदै गरेको एम्बुलेन्स दुर्घटना, शिशु र चालकको निधन, आमाबाबु सिकिस्त
पुर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ जिरो पोइन्टमा भएको सडक दुर्घटनामा एक शिशुसहित दुई जनाको निधन भएको छ । नेपालगञ्जदेखि दाङतर्फ बिरामी लिएर जाँदै गरेको रा१झ १६१ नंको एम्बुलेन्स र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ना८ख ५४३२ नंको ट्रक एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो ।
दुर्घटनामा एक शिशु र चालक सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–१ का २८ वर्षीय चित्रबहादुर सुनारको निधन भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ । शिशुको घटनास्थलमै र एम्बुलेन्स चालकको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी निरीक्षक हस्तबहादुर सुनारले दुर्घटनामा दाङको दङ्गीशरण नगरपालिका–५ का ३६ वर्षीय तीलकराम खड्का र उहाँकी पत्नी २४ वर्षीया मालती खड्का घाइते र तिलकरामको अवस्था गम्भीर रहेको छ । घाइते दुवै जनाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारको भइरहेको छ ।
बसको ढोकाबाट खसेर यात्रुको निधन
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपाकिला–११ तिरतिरे धारास्थित विपी राजमार्गमा आज बिहान यात्रुबाहक बसको ढोकाबाट खस्दा एक जनाको निधन भएको छ । कांकडभिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना ६ ख ९१३८ नम्बरको बसको ढोकाबाट खस्दा गम्भीर घाइते भई उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाइएकामा उपचारका क्रममा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले बताउनुभयो ।
निधन हुनेमा झापाको तोपगाछी–७ बस्ने वर्ष ४२ का खड्गनारायण श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गाडीको ढोका छेउमा उभिएर चुरोट खाँदै गरेको अवस्थामा हात फुत्केर लडेको प्रहरीले जनाएको छ । बस र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको गिरीले बताउनुभयो ।
०७६ मङ्सिर २३ गते सोमबार ई. स. २०१९ डिसेम्बर ०९ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
उदयपुरबाट आयाे यस्ताे दुःखद खबर, ट्याक्टरमा जलेर घाइतेकाे उपचार समस्या… सक्नेले सहयोग गराै